LEGO for Adults 10293 Santa's Visit ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်းအပြည့်အစုံ
01 / 10 / 2021 11 / 10 / 2021 Dimitri 508 Views စာ0မှတ်ချက် 10199 ဆောင်းရာသီကစားဆိုင်, 10267 Gingerbread အိမ်, 10275 Elf ကလပ်အိမ်, 10293 Santa's ခရီးစဉ်, 40499 Santa's Sleigh, ခရစ် McVeigh, ခရစ္စမတ်, Creator Expert, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, LEGO.com, reviews, ဆန်တာကလော့စ်, အဆိုပါ LEGO Group, ဆောင်းရာသီကျေးရွာ, ဆောင်းရာသီစုဆောင်းမှု
လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ဤမျှလောက်ပွဲလမ်းသဘင်ပျော်စရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်ချစ်စရာကောင်းသည့်အစုံသည် Santa ၏ကောင်းသောစာရင်းတွင်နေရာတစ်နေရာနှင့်ထိုက်တန်ပါတယ်။
Lego ဆောင်းရာသီသည်လက်ချင်းချိတ်ထားပုံရသည် Lego အုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသောအဆောက်အအုံများ Winter Village Collection သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော 10199 Winter Toy Shop ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များသို့ပွဲလမ်းသဘင်စိတ်ဓာတ်များကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးနှင်းဖုံးထားတဲ့မီးသတ်စခန်းတွေ၊ စာတိုက်တွေ၊ ဈေးတွေ၊ ဂျင်းပေါင်မုန့်အိမ်တွေ၊ Santa's အလုပ်ရုံတွေတောင်ငါတို့ကိုကုသပေးခဲ့တယ်။ ခရစ္စမတ်အကြိုအလုပ် - ထိုတစ်စုံတို့တွင်
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ယခင်နှစ်ခုထက်လက်တွေ့တွင် ပို၍ အခြေပြုထားသောပုံစံသို့ပြန်သွားသည်။10267 Gingerbread အိမ် နှင့် 10275 Elf ကလပ်အိမ်)၊ စက္ကူပေါ်တွင်၎င်းသည်ခရစ်စမတ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းယူရန်ပြီးပြည့်စုံသောအစုဖြစ်သည်။ ရာသီမှသင်မျှော်လင့်သောအရာအားလုံးသည်ဒီမှာရှိသည် Lego set)၊ စန်တာသို့စာတစ်စောင်၊ မီးဖြင့်ကွတ်ကီးများနှင့်နို့များ၊ ခြေအိတ်များချိတ်ဆွဲ ထား၍ မိသားစုလက်ဆောင်များပေးအပ်ရန်အဖေခရစ်စမတ်ကိုစောင့်နေသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မိသားစု
ဤအချက်နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၀၂၉၉ ဆောင်းရာသီအိမ်တွင်းအကြားဆွဲနိုင်သောဆင်တူမှုများအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း၊ Lego fan-turns-designer Chris McVeigh သည် p ၌ကျေးဇူးအလွန်ထူးခြားသောပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်art ထိုလှပသောဆင်ခြေလျှောအမိုးများသို့ ဒါပေမယ့်ဒီ set ကစိတ်ညစ်စရာကောင်းလား။
theme: လူကြီးများအတွက် Lego အမည်သတ်မှတ်မည် - ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ဖြန့်ချိ: စက်တင်ဘာ ၁၆ (VIP များ)၊ အောက်တိုဘာ ၁ (၂၀၂၁ တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်)
စျေးနှုန်း: £ 79.99 / $ 99.99 / € 89.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,445 အသေးစားပုံများ: 4
ထဲမှာ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု's သေတ္တာသည်မိသားစုအိမ်ကြီးကိုပြီးစီးရန်လိုအပ်သောအပိုင်း ၁၄၄၅ ပါသောနံပါတ်ကိုးအိတ်များ၊ အထင်ကြီးဖွယ်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်နှင့်ခြံစည်းရိုးနှင့်စာတိုက်ပုံးငယ်တို့ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီ၏ရွာလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်အားပေးခြင်း friends မိသားစုနှင့်အတူတကွတည်ဆောက်ရန်လမ်းညွှန်လက်စွဲနှစ်ခုရှိပါသည်။ သေးငယ်သောဘေးတိုက်နှင့်သစ်ပင်ပေါ်တွင်သေးငယ်သည့်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ပိုကြီးသောလက်စွဲသည်အိမ်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ အလွန်သေးငယ်သည့်စတစ်ကာတစ်ချပ်လည်းပါ ၀ င်သည်။
အဆောက်အ ဦး အားအိမ်ရှေ့ဂိတ်ဆောက်ခြင်းနှင့်အဖေခရစ်စမတ်သို့ထိုစာပို့ရန်အရေးကြီးသောစာတိုက်ပုံး။ နှင်းပုံများကို ၁ × ၄ အကွက်များနှင့် ၁ × ၄ နှစ်ထပ်ကွေးများဖြင့်ဖန်တီးပြီးခြံစည်းရိုးပြားထိပ်များဖုံးအုပ်ထားသောနှင်းများကိုကိုယ်စားပြုရန်သုံးသည်။ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောစာတိုက်ပုံးနှင့်မီးပုံးတို့ကိုပစ်ထည့်ပြီး၎င်းသည်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ရန်ချစ်စရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပွဲလမ်းသဘင်၌သင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားစေရန်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
မဟုတ်ရင်တောင်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းစိတ်ချမ်းသာမှာသေချာတယ်။ မင်းအဲဒီ့နောက်မှာခရစ်စမတ်ဝိညာဉ်ထဲကို ၀ င်မလာချင်သေးဘူးဆိုရင်၊ မင်းတကယ်က Grinch ကိုယ်တိုင်ဘဲ၊ ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအခုရပ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ jollier ကိုဒီကနေ ၀ ယ်ယူရလိမ့်မယ်။
သစ်ပင်သည်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုရန်ထက်ပိုမိုပါဝင်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည် - ၎င်းသည်အတော်လေးအရွယ်အစားကြီးပြီးအခြားအရာများနှင့်မတူဘဲကိုင်ရန်အတော်လေးကြီးကြောင်းခံစားရသည်။ Lego ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ၊ ဤအရာသည်မီးထွန်းသည်။ အပေါ့စားအုတ်တစ်ချပ်ကိုပင်စည်အတွင်း၌ဝှက်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန် trans-clear အုတ်များကိုသုံးသည်။ သစ်ပင်ကိုဖိချလိုက်သောအခါအတွင်းပိုင်းမီးများကတကယ့်ကိုချစ်စဖွယ်တောက်ပသောသစ်ပင်သက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လက်ဆောင်မရှိရင်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကပြီးပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီအထဲကမှအကောင်းဆုံးကအုတ်ဖြင့်ဆောက်ထားသောတံပိုးသံပါ။
ဘေးနှစ်ဖက်တည်ဆောက်မှုများသည်အတူတကွပေါင်းစည်းရန်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်းအဓိကအိမ်သည်ပျော်ရွှင်မှုသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မီးဖိုချောင်၊ ထမင်းစားခန်းနှင့်အောက်ထပ်ထိုင်ခုံတို့နှင့်ကွဲကွဲပြားပြားဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး၊ ကလေးမလေး၏အိပ်ခန်းသည်အပေါ်ထပ်ရှိလှေခါးငယ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာအရ stud-to-stud: သွားသောကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားတိုင်းကိုအသုံးချပုံနှင့်တည်ဆောက်ပုံ နည်းပညာ pins များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် နည်းပညာ သံတိုင်များ၊ ဤအရာများအားလုံးကိုထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ်ပျင်းရိဖွယ်မရှိသောတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံအတွက်၎င်းကိုအနည်းဆုံးတစ်နေရာတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သုံးသည်။
အတွင်းခန်းတစ်လျှောက်လုံးသည်ပုံစံငယ်တစ်ခုလုံးကိုအသက်သွင်းရန်နှင့်ခရစ်စမတ်တွင်မိသားစုအိမ်၏ခံစားချက်ကိုဖန်တီးရန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့နိုင်သောပျော်စရာကောင်းသောအရာလေးများနှင့်အတူတွေ့နိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားသောပွဲတော်ပရိဘောဂများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ရိုးရာအားဖြင့် poinsettia အပင်၊ မီးဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားသောခြေအိတ်များ၊ အိမ်ပတ်လည်၌ဝှက်ထားသောလက်ဆောင်များ၊ Santa အတွက်ထုတ်ထားသော cookies များနှင့်နို့များ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့ပို့ရန်စောင့်နေသောစာတစ်စောင်ရှိသည်။
စားပွဲကို holly၊ ဖယောင်းတိုင်များနှင့်အနီရောင်စားပွဲတင်အပြေးသမားတို့နှင့်သင့်လျော်စွာအလှဆင်ထားပြီးထိုင်ခုံလေးဝိုင်းရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် se တစ်ခုလုံး၏အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည် - ၎င်းတို့တွင်ခြေထောက်များမရှိသဖြင့် minifigures များသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေပုံနှင့်တူသည်။
အပြင်ဘက် ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့အလှဆင်ထားသလိုခံစားရသည်၊ တစ်ဖန်လိမ္မာပါးနပ် parts အသုံးပြုမှုကိုတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုသည်။ အစိမ်းရောင်အစင်းလက်သည်းများကိုပြတင်းပေါက်ဘောင်များ၊ အမိုးများနှင့်ပြင်ပနေရာများတစ်လျှောက်လုံးကိုဆွဲထားရန်ပြတင်းပေါက်မှန်များပေါ်မှကျနေသောနှင်းများကိုကိုယ်စားပြုရန်သုံးထားသည်။ နှင်းထုနှင့်ဆောင်းရာသီသစ်ပင်တစ်ပင်လည်းရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပြောင်းပြန်လှန်ထားသောအဖြူရောင် ၆ × ၅ အပင်သုံးရွက်ကို အသုံးပြု၍ အလင်းကသူတို့ကိုမှန်ကဖမ်းသောအခါတောက်ပသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးသည်။ ဒါကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါကသူတို့အပေါ်မှာနှင်းခဲတွေကျသွားသလိုပဲ။
အလှဆင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံအားစစ်မှန်သောခံစားမှုဖြစ်စေရုံသာမကတောက်ပသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြရန်ကူညီပေးသည်။ စန်တာသို့စာ၊ မီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွတ်ကီးများနှင့်ခြေအိတ်များအားလုံးသည်ခရစ္စမတ်အကြိုည၌ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးခံစားခဲ့ရသောထိုမှော်ခံစားမှုကိုထုတ်လွှင့်ရန်ကူညီသည်။
အဆောက်အ ဦး အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်နှစ်ခုလုံး၌လူ ဦး ရေအလွန်ပြည့်နေသောအဆောက်အအုံများသည်အလွန် sm ဖြစ်သည်art ပုံစံများ၊ အထင်ရှားဆုံးနည်းစနစ်များသည်စောင်းနေသောအမိုးများအတွက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ Sub-assembly များသည် hinges များမှတဆင့် main property သို့ချိတ်ပေးသည်၊ သူတို့ကိုစိတ်ကျေနပ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်အနေအထားသို့ရွှေ့ခွင့်ပြုသည်။ ကွေးသောအနားများနှင့်ထောင့်ချိုးပုံစံများ၏တူညီမှုသည်အလွန်ထူးခြားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့အားလုံးစန်တာကမီးခိုးခေါင်းတိုင်ရှိနေတာဘဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပေးအပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အစဉ်အလာအရခရစ္စမတ်ဟာမီးတောက်တွေကိုလျှောချတာကိုအသိဆုံးဘဲ။ ဤနေရာတွင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်သည်အတော်လေးကြီးမားသည်၊ သေးငယ်ပြီးမီးခိုးရောင်အုတ်များဖြင့်ကွက်တိကွက်ကျားတည်ဆောက်ထားသော open studs များဖြင့်သုံးပြီးအသေးစိတ်ဖန်တီးနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိရောက်မှု ရှိ၍ ကျပန်းပန်းရံအုတ်များကို ပို၍ ကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ထားသောနည်းစနစ်မှကြိုဆိုသောအပြောင်းအလဲကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့ Santa ဟာမီးခိုးခေါင်းတိုင်နဲ့တကယ်ကိုကိုက်ညီပါတယ်၊ မင်းသူ့ကိုအတွင်းထဲကိုပစ်လိုက်ရင်သူကပစ်ချပြီးအောက်ခြေကိုပစ်လိမ့်မယ်။ သူတစ်ယောက်ပါarth သည်နာရီတစ်လုံးပါ ၀ င်သောမီးခိုးတိုင်တွင်ချိတ်ထားသည် (ပြသောအချိန်သည်သန်းခေါင်အထိမိနစ်အနည်းငယ်သာ) နှင့်မိသားစုသုံးစုလုံး၏ချစ်စရာကောင်းသောမိသားစုပုံတူဖြစ်သည်။
အချောထည်ပုံစံသည်ချစ်စဖွယ်ကောင်းပြီး Winter Village ခွဲအပြင်အဆင်၌အခြားအစုံများနှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်သည်။ ပွဲလမ်းသဘင်ကာလအတွင်းစင်ပေါ်တွင် (သို့) အဖုံးအုပ်ထားသောချစ်စရာကောင်းသော display အပိုင်းအစတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
၎င်းတွင်သေးငယ်သောရုပ်သေးရုပ်လေးခုပါ ၀ င်သည် ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှုမိသားစု ၀ င်သုံး ဦး၊ အဖေ၊ အမေနှင့်သူတို့၏သမီးငယ်လေး၊ Santa Santa ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
အမေနှင့်အဖေသည်ရှိပြီးသား p ကိုသုံးသည်arts, သူတို့ကရာသီအတွက်သင့်တော်တဲ့ ၀ တ်စုံကိုခံစားနေရတုန်း၊ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုတကယ်ထည့်ပေးခဲ့တယ်။ ကလေးမလေးသည်သူမ၏ဆောင်းရာသီ PJ များအတွက်သီးသန့်နှစ်ဘက်ခြမ်းခေါင်းအပိုင်းနှင့်ကိုယ်ထည်ပုံနှိပ်စက်နှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။
Santa သည်ဤ set အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်တွေ့ရသော Santa နှင့်အတူရှိသည် 40499 Santa's Sleighပထမဆုံးအကြိမ်ပုံသွင်းထားသောခြေထောက်နှစ်ချောင်းပါလာသည်။ သူ၏ ဦး ထုပ်နှင့်မုတ်ဆိတ်တို့သည်ယခင်ဗားရှင်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အတိုင်းတူညီသော်လည်းသူ၏ခေါင်းစီးသည်ဤအရာအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိပုံနှိပ်ပုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးခြုံငုံကြည့်ပါကယနေ့ထိအဖေခရစ်စမတ်၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ဆောင်းရာသီရွာ၏ကျန်အပိုင်းများနှင့်အတူစုံလင်စွာပေါက်နေသောစျေးနှုန်းများသည်နှစ်ခုလုံးထက်စျေးသက်သာသည် 10267 Gingerbread အိမ် နှင့် 10275 Elf ကလပ်အိမ် ယူကေ၌ယူရို ၇၉.၉၉ နှင့်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပတို့တွင်ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ / € ၈၉.၉၉ ။
၎င်းသည်တည်ဆောက်ရန်နှင့် display ပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ချစ်စရာကောင်းသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ခရစ်စမတ်၏ပုံသွင်းထားသောခြေထောက်နှစ်ချောင်းသည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြင်၎င်းအတွက်ခြုံငုံကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ တကယ်တမ်းမကျေနပ်နိုင်ပါ။ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု.
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ခရစ္စမတ်၏စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖမ်းယူရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်နာ Chris McVeigh သည်ဤနှစ်အတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြောင်းသိသာထင်ရှားသည်မှာသေချာသည်။ တည်ဆောက်ပုံသို့အသေးစိတ်သွားခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပွဲလမ်းသဘင်ပုံပြင်ကိုပြောပြသည်။ minifigures များသည်သူတို့အားလုံးအတူတကွဆင်နွှဲရသည့်အတွက်အလွန် ၀ မ်းသာအားရဖြစ်ကာအဖေများနေ့ခရစ်စမတ်ရောက်မည့်မျှော်လင့်ချက်သည်သူတို့၏မျက်နှာအားလုံးတွင်မြင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ပြပွဲတွင်တောက်ပသောနည်းစနစ်များဖြင့်အတူတကွပေါင်းစည်းရန်တကယ့်ကိုအားရစရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အား st မှချိတ်ဆက်ရန်လုံလောက်သောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနှင့်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။art ပီးဆုံးရနျ။ အတူတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း friends ဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်တွေလည်းအပိုဆုကြေး အချောထည်ပုံစံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးမည်သည့်အိမ်တွင်မဆိုခရစ်စမတ်အလှဆင်မှုအတွက်ကြိုဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဒါကလူတိုင်းအတွက်သေချာတဲ့ set တစ်ခုပါ Lego fan တွေက Santa ရဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒစာရင်းထဲမှာပါဝင်သင့်တယ်၊ ဘယ်သူသိလဲ၊ မင်းလုံလုံလောက်လောက်ကောင်းကောင်းရှိရင်မင်းရဲ့ stocking ထဲဒီဇင်ဘာ ၂၅ ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းဒီလောက်အကြာကြီးမစောင့်နိုင်ရင်ဘယ်သူသိမှာလဲ။ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ယခုမှာကြားနိုင်ပါပြီ။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ထိုအလုပ်ကိုထောက်ခံရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego - အပါအဝင် ၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု - ကျွန်ုပ်တို့၏မည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုသည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
လူကြီးများ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာသို့လည်ပတ်ရန် LEGO တည်ဆောက်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ တည်ဆောက်ရန်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်သုံးနာရီကြာလိမ့်မည်။ မင်းမှာရှိရင်ဒီအချိန်ကိုတိုစေနိုင်တယ် friends မိသားစုအတွက်အကူအညီပေးရန်သီးခြားညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှစ်ခုရှိနေသောကြောင့်သတ်မှတ်အပိုင်းအသီးသီးကိုတစ်ချိန်တည်းတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
လူကြီးများ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန် LEGO တွင်အပိုင်းဘယ်နှစ်ခုရှိသနည်း။
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု အပိုင်း ၁,၄၄၅ ပါ ၀ င်သည်၊ ယခင်နှစ်ဆောင်းရာသီအစုံ ၃၀၀ နီးပါး၊ 10275 Elf ကလပ်အိမ်.
လူကြီးများ ၁၀၂၉၃ ဆန်တာသို့လာရောက်လည်ပတ်သော LEGO သည်မည်မျှကြီးသနည်း။
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု အတွင်းနှင့်အပြင်နှစ်ခုစလုံးတွင်အသေးစိတ်ပြည့်နှက်နေသော်လည်းအဓိကအဆောက်အအုံမှာအကျယ် ၂၇ စင်တီမီတာ၊ အမြင့် ၁၉ စင်တီမီတာနှင့်အမြင့် ၁၆ စင်တီမီတာသာရှိသည်။
လူကြီးများအတွက် ၁၀၂၉၃ ဆန်တာအလည်အပတ်အတွက် LEGO သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။
၁၀၂၉၃ ဆန်တာ၏လည်ပတ်မှု ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ၊ ယူကေတွင် ၇၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ အမေရိကန်တွင် ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပတစ်လွှားတွင် ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
← Lego Star Wars ကြောက်စရာကောင်းသောပုံပြင်များကိုယခုလွှင့်သည် Disney+
LEGO ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ Ideas ပြန်လည်ချေဖျက်နိုင်သော ၂၁၃၂၅ အလယ်ခေတ်ပန်းဘဲသမား →